အာလူးထမင်း – Everybody Read TChen
ကဲပါလေ ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်တတ်တဲ့ ဟင်းလေးချက်ပြီး အေးအေးတင်တာပဲ ကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး ……
သေးတယ်။ အရင်တခေါက်လုပ်ပြီး ပုံတွေတင်တော့ သူက စားချင်တယ် ဘလောခ်မှာလာအော်တာနဲ့လေ။ ချက်နည်းကတော့ ဒီမှာပါ။ ထားတော့ ခုတလောတော့ ရိုးရိုးလေးပဲ စားချင်နေတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပဲ…..
Posted on May 1, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, သက်သတ်လွတ်, အရွက်ကြော်, အာလူးထမင်း10 Comments on အာလူး အစပ်မွှေကြော်
အရင်တနေ့ က အားလုံး ကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲတော့ မြန်မြန်ပဲ ပြောပြမယ် ဘယ်လိုချက်ရလဲ ဆိုတာ…………….
ပထမ ဆုံး အာလူးတွေကို ကြိုတင်ပြုတ်ထားပါတယ် နောက် ကျက်မကျက်သိရအောင် တူလေးနဲ့ ထိုးထိုးပြီး စမ်းပါတယ်။ ရပြီဆိုရင်တော့ အအေးခံထားပြီး ခုပုံမှာပြထားသလို အခွံခွာပြီး ကြေနေအောင်ချေထားပါတယ်။
နောက်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေ ကို ပထမ ရေနဲ့ အရင် ပြုတ်ပါတယ်။ နောက် အခွံလေးတွေ ခွာထားပါတယ် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါ။ နောက်တော့ ဆီလေးနည်းနည်း ထည့်ပြီး ဆား အချိုမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့် သင့်ရုံထည့် ဟင်းအနှစ်လေးတွေဖြစ်သွားအောင် ချက်ပေးပါတယ်။
ဒါကတော့ အာလူးထမင်းနဲ့ စားဖို့ ငရုတ်သီးကြော်ထားတာပါ။
ပြီးတော့ ကြက်သွန်နီ ကို ပါးပါးလှီး ပြီးတော့ ကြွတ်ကြွတ်လေးရအောင်ကြော်ယူပါတယ်။ နောက်ဆီပူအိုးကနေ ကြက်သွန်နီကြော်တွေ ကိုဆယ်ပြီးအအေးခံပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကြက်သွန်နီ ကို တင်ကြို လှီးထားပြီး နေလှမ်းထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ကြက်သွန်ကြော်ဆီကို အာလူးထမင်းနဲ့ စမ်းစားဖို့နည်းနည်းချန်ထားပါတယ်။
နောက်တဆင့်ကတော့ အရေးကြီးတဲ့ ထမင်းနယ်အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုန က ချက်ပြီးအအေးခံထားတဲ့ ထမင်း ရယ်၊ ပြုတ်ပြီးချေထားတဲ့ အာလူးရယ်၊ ချက်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ရယ် စတာတွေကို ဇလုံကြီးကြီး တခုထဲမှာ ထည့် ပြီးတော့ ဆား နဲ့ အချိုမှုန့်သင့်ရုံထည့် ပြီး နယ်ဖတ်ရပါတယ် နယ်တဲ့နေရာမှာ တနေရာ ထဲကိုဦးတည်ပြီး လှည့်လှည့်နယ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ် အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်အနှစ် နဲ့ ဆား၊ အချိုမှုန့် စတာတွေ ပိုပြီး သမ မျှတအောင်ပါ။ နယ်ရင်းနည်းနည်းမြည်းကြည့်ပြီး အရသာ ကို လိုတိုး ပိုလျော့ လုပ်ပါတယ်။
ရပြီဆိုရင်တော့ အလုံးလေးတွေ သင့်အောင်လုံးပြီးပြင်ထားရင် စားလို့ရပါပြီ။
အာလူးထမင်းနဲ့တူတူ စားဖို့အတွက် က ဂျူးမြစ်ရနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ မရရင် ဆလတ်ရွက်စတာတွေနဲ့ လဲ နှစ်သက်သလို သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခုလဲ တီ က အဲတာတွေ တခုမှအလွယ်မရနိုင်လို့ အလွယ်ရတဲ့ သခွားသီးလေးနဲ့ ပဲ ဖြစ်သလိုလွေးပါတယ်။ နောက်တီ ကြိုက်တတ်လို့ နံနံပင်နဲ့တွဲစားပါတယ်။ ပိုစားကောင်းအောင် ကြက်သားကြော်လေး ၀ယ်တွယ်ပြန်ပါတယ်။
အောက်မှာတော့ မစားခင် ဒီလိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်
ကဲ အခုလိုဆိုတော့ စားသောက်ချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ အာလူးထမင်းချဉ်ပါ။ တချို့ကလဲ ကြိုက်တတ်ရင် ငါးနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်။ တီကတော့ လူမျိုးဘာသာမရွေး အားလုံးစားလို့ ရအောင် သတ်သတ်လွတ်ပဲလုပ်ထားတယ်လေနော်။ ပြီးတော့ တီက ဒါပထမ ဆုံးအကြိမ်ချက်ကြည့်ခြင်းပါ။ အဆင်ပြေပြေစားလို့ဖြစ်တဲ့အပြင် တော်တော်လေးကို အရသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ (တယ်တော်တဲ့ ငါပါလားနော်…ယောင်းမတော်ချင်တဲ့ မောင်ရှိအစ်မတွေ၊ တူမတော်ချင်တဲ့ တူရှိအဒေါ်တွေ၊ မရီးတော်ချင်တဲ့ အကိုရှိ ညီမတွေ၊သမီးချွေးမ တော်ချင်တဲ့ သားရှိအမေတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆက်သွယ်ကြနော် နံပါတ်စဉ်အလိုက်တွေ့ဆုံပေးမယ် အားလုံးကို…ခိခိ) နောက်တခု က ချက်တဲ့နေရာ မှာ တီ က တီ့အမေ ချက်ကျွေးတာ မြင်ဖူးနေကြအတိုင်း သတိရတာလေးတွေထည့် ဖြည့်ချက်ရတာပါ။ ကိုယ်တိုင်တောင်တခါ မှမလုပ်ဖူးဘူးလေ ဒါက ပထမ ဆုံး….း)။ ခုတော့………………အားလုံးကို စားစေချင်လို့ ကြိုးစားပမ်းစားချက်ထားပါတယ်။ စားသွားကြနော်။ နာမည်တွေ တပ်ပြီးမခေါ်တော့ဘူး တော်ကြာ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ က ဘယ်သူ့တော့ မခေါ်ဘူးပေါ့လေ…. ဘာလဲမကျွေးချင်ဘူးလား………. စသဖြင့် စကားနာထိုး စကားများ စကားရှုပ်ရတာတွေကြောင့်ပါ။
ဖတ်မိတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို စေတနာရှိရှိကျွေးတယ်လို့ပဲမှတ်ပါနော်။
ပိုစ့်ကို အခု သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးပြန်သွားမှရေးရလို့ စောင့်ပြီးစားချင်တဲ့သူတွေ ကိုလည်း တခါတည်းတောင်းပန်လိုက်တယ်နော်။
1st May 2009 (May day)
Posted on April 30, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အာလူးထမင်း24 Comments on ကျွေးမယ်ပြောထားတဲ့ ရှမ်းအာလူးထမင်းချဉ်……း)